'कक्षा कोठाको समस्या कायमै छ' | RevoScience Nepali
Home /‘कक्षा कोठाको समस्या कायमै छ’
कलेजमा विज्ञानAugust 14, 2017
प्रा.डा. गोकर्णबहादुर मोट्रा क्याम्पस प्रमुख, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस
इन्जिनियरिङ पाठ्यक्रम त्रुटीपूटी छन् भन्छन्, हो ?
पाठ्यक्रम अन्य देशको दाजोमा छन् । तर नेपाल भूकम्प प्रभावित क्षेत्र भएकोले त्योसँग सम्वन्धित पढाइ नभएको भन्ने कुराहरु चाही उठेको सत्य हो । स्तरउन्नतिकालागि पहल भैरेहेको मैले चाल पाएको छु । पुनःमुल्यांकन गर्ने क्रम चलिरहेको छ ।
सुझाब के दिनु भयो ?
देश सुहाँउदो हुनु पर्यो भनेका छौं । त्यो भनेको कस्तो हो भने, सिभिल इन्जिनियरिङ विषयकालागि भूकम्प प्रतिरोधात्मक, रेल, बाढी पहिरोबाट बच्ने खालका संरचना बनाउन सक्नेलगायतका छन् । अर्को भनेको हाम्रा इन्जिनियरले विदेशी इन्जिनियरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालका हुनु प¥यो । यहाँ उत्पादन भएका विद्यार्थी विदेशमा गएर काम गर्दा त्यस्तो समस्या नपरोस भन्ने पनि हो ।
शिक्षक जनशक्ति पाउदैन, पाएका पनि टिक्दैन भन्छन नी !
अध्ययन गर्न विदेशीय पछि नफर्केका पनि छन् । केही विषयमा शिक्षक पाउन गाह्रो छ । त्रिविको आफ्नै खाले छन् । सबै समयमा हुन सकिराखेको छैन । हाम्रा ल्यावहरु पुरानो हुँदै गइरेहका छन् । भूकम्पपछि कक्षा कोठाको समस्या समाधान कायमै छ ।
इन्जिनियरको गुणस्तर खस्केको भन्छन्, हो ?
नेपाल इन्जिनिरिङ परिषद् परिक्षाको व्यवस्था गर्न लागि परेको छ । त्यो भएमा अहिले देखिएका समस्या समाधान हुन्छ ।
थप विषय अध्यापन गराउँदै हुनुहुन्छ ?
हामीसँग पूर्वाधारको अभावले अन्य विषय थप्न सकेको छैन । यदि त्यो भएमा केमिकल, बायोमेडिकल, एरोनटीकल इन्जिनियरिङ थप्ने योजनामा छौं ।
जीवनउपयोगी शिक्षा दिदै आएका छौं
जिल्लाकै प्रतिष्ठित क्याम्पस नै नीलकण्ठ…
वद्यार्थीहरुको लागि शैक्षिक वातावरण तयार…